Iikhosi esizinikelayo-Isikolo soLwimi oluPhakathi, iCambridge
Isikolo soLwimi oluPhakathi linikeza isiNgesi jikelele, isiNgesi esinzulu, iXesha leXesha kunye neSifundo seMviwo. Ulwazi ngolwazi ngalunye lwezi zifundo lunokufumaneka usebenzisa imenyu ngakwesokudla.
Siyakwamkela abafundi bonke unyaka wonke kwaye sivale kuphela ngexesha leKrismesi.
I-Course yakho kunye nexesha lakho lexesha
Ikhosi yakho inokuxhomekeka kwinqanaba lakho, ngoko ke sikunika ukuhlolwa kokubeka xa ufika. Unokuthatha kwakhona Uvavanyo lwesiNgesi lwesiNgesi, okuza kukuxelela ukuba yiyiphi imviwo onokukwazi ukuyilungiselela. Oku kuphela isikhokelo, ngoko siya kukucebisa ngelixa uthabatha izifundo.
Iikhosi zethu zexesha elipheleleyo zibizwa IsiNgesi jikelele (Ii-15 iiyure zeeyure ngeveki) okanye IsiNgesi esinzulu (Ii-21 iiyure zezifundo ngeveki). Izifundo zihamba njalo ukusasa ngoMsombuluko ukuya kuLwesihlanu, i-09: i-30 ide i-13: i-00 kunye nekhefu-break in 11: 00. Ukuba ukhetha isiNgesi esiphezulu kukho iinkalo ngoLwesibili, ngoLwesithathu noLwesine emini phakathi kwe-14: 00-16: 00.
Siphinde sinikeze izifundo ezahlukeneyo zexesha lesahlulo: naliphi na ixesha lonyaka unokufunda ngazo Ngemva kwexesha lesondlo, okuyiyona nxalenye yemini yesiNgesi enzulu, njengokuba ngasentla. Ngezihlandlo ezithile zonyaka, sinikeza ixesha lesahlulo Abaqalayo NgoLwesibini, uLwesithathu kunye neLwesine ukusuka kwi-09: 30 ukuya kwi-11.00.
Kukho imisebenzi yamasemini okanye yantambama okanye nayiphi na yabafundi bethu, enikeza ubungqina obongezelelweyo kwisiNgesi esithethayo.
Unokuqala nanoma yiyiphi iMvulo (ngaphandle kweeholide zikawonkewonke) ubuncinci beveki enye. Uninzi lwabafundi bafunda iiveki ze-4-12. Abanye abafundi bafundela kunyaka owodwa. Sinokululeka malunga nobude bekhosi efunekayo ukufezekisa iinjongo ezithile.
Ubuninzi beklasi yobukhulu yi10, kodwa ngokuqhelekileyo kukho phakathi kwe-5 nabafundi be-7 nganye kwiklasi. Xa ufika esikolweni uza kwenza uvavanyo lokuPhakamisa ukuhlola izinga lakho. Emva koko uza kufakwa kwiklasi ngokwezinga legrama yakho, amandla okuthetha kunye neenjongo zakho. Ukusebenzisa iincwadi zezifundo ezahlukeneyo uya kufunda isiNgesi ngokusebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zezihloko ngokugxininisa ekunxibelelaneni okuthethiweyo. Oku kubandakanya umsebenzi-mbini, iingxoxo kunye nomdlalo. Uya kuba nethuba lokunyusa isigama sakho kunye nokudibanisa ulwazi lwakho lwegrama.
Ootitshala bakho baya kukucebisa ngoviwo olufanelekileyo Unokuthatha novavanyo lweNgesi lwesiCambridge. ukuba...	Funda Okuninzi